Tag: site kumhanya | Martech Zone
Tag: site kumhanya
Makore apfuura, isu taifanira kutamisa saiti yedu kune itsva inomiririra mushure mekunge yedu yatiri kuitisa yatanga kungononoka uye zvishoma nezvishoma. Hapana anoda kuchinja makambani anotambira… kunyanya mumwe munhu arikugamuchira akawanda mawebhusaiti. Kutama kunogona kuita kunorwadza. Kunze kwekusimudzira kwekukurumidza, Flywheel akapa mahara kutama saka yaive kuhwina-kuhwina. Ndakanga ndisina sarudzo, zvakadaro, ndakapihwa iro rakati rebei rebasa randinoita kugadzirisa masayiti
China, Gunyana 13, 2018 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Pese pandinotsanangudza chinzvimbo kune vatengi vangu, ini ndinoshandisa fananidzo yemujaho wechikepe uko Google iri yegungwa uye vese vaunokwikwidzana navo zvimwe zvikepe. Mamwe magwa akakura uye ari nani, mamwe ekare uye asingagare achiyangarara. Zvichakadaro, gungwa riri kufambawo… nemadutu (shanduko yegorgorithm), masaisai (tsvaga mukurumbira makanda nezvimedu), uyezve kuenderera mberi kukurumbira kwezvako zvemukati. Pane kazhinji nguva pandinogona kuziva